လူပျို Wall Paper ဖလားစက်ရုံ | China Single Wall Paper ဖလားထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
စက္ကူ CUP & LID
အသုပ် Box ကို
သကြားဓာတ် BAGASSE စားပွဲ
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Disposable P ...
ပူပြင်းရောင်း Kraft စက္ကူ Soup ဖလား
ရောင်စုံ Eco Friendly သောက် ...
လက်ကား kraft စက္ကူအိတ်
ဥရောပအတွက် 7oz ကော်ဖီစက္ကူခွက်
Crack-resistance ဒီဇိုင်း - ယိုဖိတ်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။
တောက်ပ။ တောက်ပသောအရောင်များ။ DIY အတွက်အကောင်းဆုံး
သင်အကြိုက်ဆုံးပူသို့မဟုတ်အအေးအဖျော်ယမကာ 7oz ရရှိထားသည်
ရုံး၊ အားလပ်ရက်များ၊ ပါတီပွဲများ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများသို့မဟုတ်အထူးအစီအစဉ်များအတွက်လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်သည်
1. item: 8Boz အမြောက်အများတစ်ခါသုံးကော်ဖီခွက်;
2. ပစ္စည်း: 100% အစားအစာတန်းကတ်ထူပြားစက္ကူ;
3.Coating: PE စီတန်း;
4.Printing: Flexo ပုံနှိပ်ခြင်း;
5.Size: 2.5oz ~ 24oz ရရှိနိုင်;
6.Color: သင်၏ Pantone အရောင်အရ;
7.Packing: 50pcs / opp အိတ်; 20 အိတ် / ပုံးသို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း;
8.logo: စိတ်တိုင်းကျလိုဂို၊ OEM ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
9. နမူနာအချိန်: အနုပညာလက်ရာများအတည်ပြုပြီးနောက်7ရက်အတွင်း။
၂.၅ ံမှ ၂၄ ံမှ ၂၄ ံအထိစွမ်းရည်ရှိသော 1.Disposable စက္ကူခွက်။ ရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများ။ 150g + 18PE မှ 350g + 18PE မှအရည်အသွေးမြင့်အစားအစာတန်း paperboard3.We သည် PE စက္ကူခွက်တစ်လုံးတည်းကိုဖြစ်စေ၊
ဒီနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်၏ 5.The ပုံနှိပ်ခြင်း offset နှင့် flexo ဂရပ်ဖစ်ပုံနှိပ်ခြင်းပါဝင်သည်
7. ဤထုတ်ကုန်သည်အချိုရည်၊ ရေအေး၊ ရေခဲမုန့်၊ ကော်ဖီစသည်တို့အတွက်သင့်တော်သည်။
9. ထုပ်ပိုး: 50pcs / sleeves.20sleeves / CTN, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး။
ပူပြင်းသောအဖျော်ယမကာများအတွက် 9oz စက္ကူခွက်
1. အရွယ်အစား: အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား 2.5oz ကနေ 24 အောင်စကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
၂။ အရောင် - သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အရ (အရောင် ၆ ခုအထိ) ။
၃။ အလေးချိန် - အလေးအတိုင်းအတာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၃။ ပုံနှိပ်ခြင်း - ရေအခြေခံသည့်မင်ဖြင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်း။
4. ခဲအချိန်: အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သော။
၅။ အရည်အသွေး - ယိုစိမ့်မှု၊ အနံ့နှင့်အစွန်းအထင်းများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လူ၏စွမ်းအားနှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအရအရည်အသွေးမြင့်မားသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်။
6. ထုပ်ပိုး: 50 ကို PCs / လက်။ 1000 pcs / ctn သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။
၇။ တစ်ခါသုံး - ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်။
၈ ။ OEM ကြိုဆိုသည်။
၉။ ထောက်ပံ့ရေး - စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းကိုဖန်တီးသည်။
10oz espresso စက္ကူကော်ဖီခွက်ကို
ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောနံရံစက္ကူခွက်များကျယ်ပြန့်စွာကိုကော်ဖီဆိုင်များနှင့်အိမ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤခွက်များသည်ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်နို့ကဲ့သို့သောအချိုရည်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက္ကူခွက်များသည်စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ထားသောနှစ်သက်ဖွယ်ဒီဇိုင်းများဖြင့်လာသည်၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆီအသုံးပြုသော flexo printing ဖြစ်သည်။
တစ်ခါသုံးစက္ကူခွက်တစ်လုံး 12oz ထုတ်ဝေသည်
1. 2.5oz-16oz တစ်ခုတည်း PE သို့မဟုတ်နှစ်ဆ PE coated နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
စက္ကူ grammage ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးနှင့်အတူ 3. ။
6. တရုတ်စက်ရုံ / ထုတ်လုပ်သူ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့်စက္ကူခွက်များကို 150GSM မှ 350GSM အထိစာရွက်များဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ စက္ကူခွက်ထဲမှာ 18PE နဲ့ဖုံးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နေသောလက်ရှိစက္ကူဖလားအရွယ်အစားမှာ 2.5oz, 3oz, 3.5oz, 4oz, 5oz, 6oz, 7oz, 8oz, 8Boz, 9oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz ။
6.5oz 7oz ကော်ဖီလက္ကားစက္ကူခွက်
၂.၅oz မှ ၂၄oz အထိစွမ်းရည်ရှိသော 1.Disposable paper paper
2.Materials: 150g + 18PE မှ 350g + 18PE, အရည်အသွေးမြင့်အစားအစာတန်းကတ်ထူပြားအထိ
ဖောက်သည်များအားတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ဖက် PE စက္ကူခွက်များကို 3.We ပေးသည်။
ANHUI LENKIN ထုပ်ပိုး CO ။ , LTD